नेपालीले प्रयोग गर्ने ५ झुर पासवर्ड, कतै तपाईंको त परेन ? - ramechhapkhabar.com
नेपालीले प्रयोग गर्ने ५ झुर पासवर्ड, कतै तपाईंको त परेन ?
काठमाडौं । सूचना प्रविधिको व्यापक विकास र विस्तारसँगै मानिसहरुले थुप्रै किसिमका अनलाइन अकाउन्ट खोलेका छन् । तर यस्ता अकाउन्ट सुरक्षाका दृष्टिले निकै कमजाेर रहेकाे पाइएकाे छ ।
हालै बाहिरएकाे एक तथ्यअनुसार नेपालमा अझै पनि पुरानै शैलीको पासवर्ड प्रयोग भइरहेकाे छ । साइबर सुरक्षा अनुसन्धानकर्मी एवं विज्ञ विजय लिम्बुले नेपालबाट लिक भएका पासवर्डमध्ये शीर्ष ५ पासवर्ड शेयर गरेका छन् ।
फेसबुकमार्फत् उनले दिएकाे जानकारीअनुसार लिक भएका पासवर्ड निकै आधारभूत र कमजोर पासवर्ड हुन्, जुन सजिलै क्र्याक गर्न सकिन्छ । सुरक्षाका लागि यस्ता पासवर्ड निकै खराब हुन् । अझै पनि शब्द, संख्या, नाम आदि राखेर पासवर्ड सिर्जना गर्ने अभ्यास छ । सुरक्षाका हिसाबले यस्ता पासवर्ड प्रतिकूल हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
धेरै नेपालीले प्रयोग गर्ने ५ पासवर्ड
Password, Password123, Kathmandu, nepal, nepal123
यदि तपाईं आफ्नो अनलाइन अकाउन्टलाई सुरक्षित राख्न चाहनुहुन्छ भने बलियो पासवर्ड राख्नैपर्छ । तर पासवर्ड जतिसुकै बलियो भएपनि ती सबैलाई क्र्याक गर्न असम्भव भने छैन । रेन्बो टेबल अट्याक, ब्रूट फोर्स अट्याक, सोसल इन्जिनियरिङ, फिसिङ, माल्वेयर र प्लेन ओल्ड गेसिङ जस्ता विभिन्न विधिबाट पासवर्ड क्र्याक गर्न सकिन्छ ।
अनलाइनमा तपाईंको ईमेल वा पासवर्ड लिक भएको त छैन ? यसरी गर्नुहोस् परीक्षण
काठमाडौैं । पछिल्लो समय ह्याकिङ तथा डेटा लिकका घटना बढ्दै गएका छन् । यस्ता घटनामा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको ईमेल तथा पासवर्ड लिक हुने गर्छ । यस्ता विवरण साइबर अपराधीका लागि आम्दानीको स्रोतसमेत हुन् । डार्क वेबमा राखेर यस्ता अपराधीहरूले ठूलो रकम कमाउँछन् ।
हामीलाई ईमेल लिक हुँदा के नै हुन्छ, पासवर्डमात्रै लिक हुँदा के नै हुन्छ भन्ने भान पनि परिरहेका हुनसक्छ । तर, अहिले डेटाको दुनियाँमा यसको महत्व धेरै छ ।
तपाईंको ईमेल र पासवर्ड पत्ता लगाई सामाजिक सञ्जालमा पहुँच बनाउने, विभिन्न गतिविधि गर्ने खतरा हुन्छ । त्यसैले आफ्नो ईमेल र पासवर्ड सुरक्षित छ वा छैन भनी बेलाबेलामा जान्न आवश्यक छ ।
त्यसका लागि विभिन्न माध्यम छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने प्लेटफर्मको रुपमा ‘Have I Been Pwned’ रहेको छ । जसमा हालसम्म लिक भएका ११ अर्ब ४२ करोड ८ लाख भन्दा बढी ईमेल रहेका छन् । जहाँ तपाईंले आफ्नो ईमेल हाली अहिलेसम्म भएको लिकमा आफ्नो ईमेल परे/नपरेको भन्ने विषयमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ ।
त्यस्तै पासवर्डको हकमा पनि विभिन्न प्लेटफर्म रहेका छन् । जसमा एन्टिभाइरस कम्पनी अभास्ट र नोर्डले पनि यो सेवा उपलब्ध गराएका छन् । त्यसमध्ये नोर्डपासमा हालसम्म लिक भएका ७ अर्ब ८८ करोड ४० लाखभन्दा बढी पासवर्ड सामावेश छ । भने, एभास्ट ह्याक चेकमा ५ अर्ब २८ करोड ३८ लाख पासवर्ड छ ।
जहाँ तपाईंले आफूले प्रयोग गरिरहेको पासवर्ड राखी परीक्षण गर्न सक्नुहुनेछ । यदि त्यसरी परीक्षण गर्दा तपाईंको पासवर्ड तथा ईमेल यसअघि नै लिक भइसकेको भएमा तपाईंले तत्कालै पासवर्ड परिवर्तन गर्न तथा ईमेलको हकमा टु फ्याक्टर अथेन्टिकेशन प्रयोग गर्न आवश्यक हुन्छ । टेकपाना